United States jikọtara ọnụ n'ezie mgbe onye mwakpo kụrụ aka na ọla edo na ememe nkwa na Utah na Mee 10, 1869, iji mezue okporo ụzọ ụgbọ elu mbu. N'ebe ọwụwa anyanwụ California, nke owuwu ya were ihe karịrị afọ asaa [More ...]
Mgbe ọ hapụsịrị Washington, ụgbọ oloko ahụ buru ozu nke Abraham Lincoln n’April 21, 1865, ihe dị ka izu abụọ na obodo asaa ruo ihe dị ka izu abụọ tupu ha erute ili onye isi ala, bụ onye ahụ e gburu na Springfield, Illinois. [More ...]
Ndị isi ọdụ ụgbọ mmiri Baltimore, ọdụ ụgbọ mmiri nke asọmpi iji soro mgbawa azụmahịa dị na New York mgbe e wusịrị Erie Canal, bụ ụzọ ụgbọ okporo kilomita 600km na Osimiri Ohio na Wheeling, West Virginia. [More ...]
USS laghachiri na Portd Kidd, ekwenyesiri na ọ nwere COVID-19
Nkwupụta Pentagon kwupụtara na nso nso a gosipụtara na ntiwapụ nke COVID-100 dị na USS Kidd (DDG-19), otu n'ime ndị mbibi nke klas Arleigh Burke nke ndị agha mmiri America. N'ime onodu a, ndị agha mmiri US na-ekwuputa na ụgbọ mmiri na Southern California [More ...]
CEVA Logistics na-ahazi mbupu nke ngwaahịa dị mkpa ka ebuga ya na ụlọ ọrụ na-emepụta US na Kokomo, Indiana, n'ụwa niile. Ekele dịrị na nhazi atụmatụ, nhazi na itinye n'ọrụ nke otu otu CEVA Logistics [More ...]
California iji belata atumatu ikuku Greenhouse gas na arụ ọrụ ụgbọ oloko
Iji belata ikuku anwụrụ ọkụ si na Steeti California, USA, enyere ego ruru nde 17 maka ọrụ ụgbọ njem iri na asaa. Ationlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Transportgbọ Ewetara California Ebelatala ikuku gas na-emetụta ikuku n'afọ a [More ...]
Na-eso ndị na-anya ụgbọ elu na nchịkọta ndị agha US, COVID-19 chọpụtakwara ikpe na onye na-ebibi ihe. Ndị agha Kovid-18 n'ime ndị agha iri na asatọ nọ na USS Kidd 'mbibi ahụ nke dị na ndịda United States [More ...]
Lolọ ọrụ US Lockheed Martin Avionics Tech bịanyere aka na U.S. Air Force maka nkwekọrịta maka ụgbọ elu U-2 Dragon Lady. Lockheed Martin, onye na-ere ahịa nke US Department of Defense Pentagon, [More ...]
Kọmitii Ndị isi UPS (NYSE: UPS) kwupụtara na ka ọnwa June dị 1, ka ahọrọ Carol Tomé ka ọ bụrụ onye isi nchịkwa UPS (CEO). Ugbu a na - arụ ọrụ dị ka Onye isi oche nke Board na General Manager [More ...]
Dika mkpebi mbu si di, mmadu abuo nwuru ma mmadu 1 meruru aru n'ihi ogbunigwe nke ogbunigwe abuo abuo na Mexico. Tragbọ oloko abụọ na-agbakọ na ọdụ ụgbọ metro nke isi obodo Tacubaya nke Mexico, nke nwere otu aha obodo ahụ. O mere [More ...]
Mmadu niile na-akwa n ’Subzọ a
Onye ọ bụla na-achị ọchị na Thislọ Mgbakọ a: Ndị ọrụ mgbasa ozi anaghị enwe nsogbu ịchọta isiokwu ọzọ. Ihe onyonyo a, na-agbasa ebe niile a na-ekerịta ihe, egosiputara dịka ọmụmaatụ "Community Psychology". Ọtụtụ ndị nyocha [More ...]
zkteco Magna e ahọrọ maka Digital Marketing Digital Marketing Needs na Turkey
Argentine Trenes Argentinos bụkwa usoro ụgbọ okporo ígwè mbụ ma ọ bụ nke dị n'okpuru ala na Indonesia, Jakarta MRT, nke na-arụ ọrụ dị ka onye ọrụ mmezi nke ọrụ ahụ iji mee ka ọgbara ọhụrụ ma gbasaa usoro okporo ụzọ maka Operadora Ferroviaria. [More ...]
Companylọ ọrụ railtali Salini kwupụtara na ọ meriri nnukwu ụgbọ oloko a na-agba ọsọ dị nro na USA. Nnukwu $ 5,9 a mejupụtara ngwugwu nke gụnyere, imewe na mmezi nke ụzọ ụgbọ elu dị ọsọ n'etiti Houston na Dallas. [More ...]